I-Seabird - lge 2 bdrm aircond parkhome kunye neFoxtel - I-Airbnb
I-Seabird - lge 2 bdrm aircond parkhome kunye neFoxtel
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAntony
Ilungele iintsapho, indlu yethu enamagumbi okulala ayi-2 enomoya otyhefayo ikwipaki yeekharaveni elunxwemeni kwaye iyure eyi-1 kuphela kuMntla wePerth. Indlu yethu inendawo enkulu yokuhlala, i-Foxtel Platinum (zonke iindlela), ikhitshi, indlu yangasese yangaphakathi negumbi lokuhlambela /indawo yokuhlamba iimpahla kunye nendawo enkulu yokonwaba phandle. Ngelishwa, azivumelekanga izilwanyana zasekhaya.
Ikhaya lethu elinamagumbi okulala ayi-2 liphantse libe ziimitha eziyi-100 ukuya elunxwemeni. Ukongezelela kwindawo yokuhlala evulekileyo ene-TV enkulu, i-DVD player kunye ne-Foxtel PLATINUM (oko kukuthi, zonke iindlela) kukho nendawo enkulu yangaphandle yokonwaba ene-BBQ. Inethoyilethi engaphakathi kunye negumbi lokuhlambela / indawo yokuhlamba iimpahla edibene nangaphandle. Sinemidlalo emininzi yebhodi kunye neepikniki zokukugcina wonwabile.
Indawo yethu yepaki ikwipaki yeekharaveni yabucala equka malunga neebloko eziyi-200 - iindawo ezininzi zepaki kunye neekharaveni/izihlomelo. Kukho i- deli encinci kwisayithi kunye nevenkile enkulu kunye ne-pub ~200m ukusuka endleleni.
Ipaki yeekharaveni iselunxwemeni ibe ibonakala kakuhle kakhulu kwiiPanoramic Ocean (hayi kwikhaya lethu lepaki) ibe uyakwazi ukuya elunxwemeni.
Mna noRebecca siyafumaneka efowunini okanye kwi-imeyile.